Kunoma okuyidolobha kunenkinga ukuwohloka kwezindlu akusebenzi nge kanyekanye ekuqaleni-up izakhiwo ezintsha yesimanje. Inhloko-dolobha ye ezweni lethu kulesi sici ingeyona okuhlukile. Kubhidlizwe esinezitezi ezinhlanu e Moscow, abeza isimo agugile, iziphathimandla zizama ukuxazulula inkinga izindlu zokuguga.
Kabuhlungu ajwayelekile kubo bonke emihlanu-storey "Khrushchev" amashumi eminyaka luhlobise cityscapes dolobha. Isakhiwo babacela ukuba phakathi nekhulu leminyaka eledlule ashaqa omkhulu ngokufaka endaweni.
Isici esiphawulekayo izindlu ezinjalo - amakamelo encane, izindonga mncane ngaphandle ukwahlukanisa efanele yokugezela kuhlanganiswe. Lezi nemingcele kuthiwa namuhla ayisekho ohlwini. Ngaphezu kwalokho, ezihlukile kwezisemthethweni kungahlaleki, lokusho eliphansi induduzo.
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi inkinga yama-ukubhidliza sekwephuzile of esinezitezi ezinhlanu eMoscow. Qala lokhu yeqhawe emuva kuze kufike 1998, futhi esigabeni sokugcina kulindeleke ukuba siqedwe ngo-kule minyaka emibili ezayo.
Luyini uhlelo "Ezezindlu"?
Ngaphansi kwaleli gama Kuyaziwa yokutholwa ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule uhlelo eMoscow kamasipala, ogama mission - ukuthi lowo muntu adilize amakhaya abadala futhi ahlinzeke abanikazi yangaphambili entsha isikhala yokuphila kwanamuhla. Lolu hlelo wethulwa 2011.
Ngenxa omningi Khrushchev ngesikhathi kwadingeka ukuba ukuhlela umsebenzi yesondlo, ngokusekelwe isikhathi ngokwanele eside. Uhlu olusemthethweni kubhidlizwe esinezitezi ezinhlanu e Moscow, ngokuphathelene eziphuthumayo kanye nezindlu agugile, ekuqaleni, kwakukhona amakhaya 1722. Usuku ukwakhiwa ngamunye wabo - phakathi 1955 kanye 1969.
Isigaba lokugcina uhlelo
Okwamanje, "abasinde" babe esingaphansi lweshumi lemali wathi. Esigabeni sokugcina uhlelo uhlelo kwesikhathi 2017-2018 GG. Phakathi nalesi sikhathi, uyothwala zinyanga ezinhlanu noma eziyisithupha kweshumi ill-fated "Khrushchev".
Izindawo main lapho kubhidlizwa nalehleliwe esinezitezi ezinhlanu e Moscow - Zao, North, South-West, Mpumalanga, Nyakatho-entshonalanga. Iningi itholakala ezitaladini izwe enyakatho-ntshonalanga nesifunda ezizimele. Demolition of esinezitezi ezinhlanu wokwakha amakheli e Moscow eminyakeni emibili ezayo zaziwa manje. Funda kubo kwi-website esemthethweni hlelo.
imisebenzi ngezimali matasa ikakhulukazi isimo, kodwa usukela futhi ukubamba iqhaza abaxhasi yangasese. Inombolo insiza ukuthi kulindeleke ukuba asebenze nge sesigaba sokugcina uhlelo (in the 2 iminyaka ezayo), kuhlanganisa eziningi kuqhathaniswa "entsha" esinezitezi ezinhlanu, elakhiwa iminyaka okuyinto - kusukela ngo-1960 kuya 1975.
Ngokusho umehluko yayo nge samuntu abazange ngenhla kodwa ngokuqondene nesikhathi kamuva nokuthuma idatha isimo esiphuthumayo ayizange amakhaya kusongelwa. Muva nje, iziphathimandla ahlelile bonyana usebenze izakhiwo ezinjalo futhi.
Ngaphezu kwalokho, sina okuxoxwe design ngempela exotic superstructure ezindlini ezifana izibuya okwengeziwe engenhla. Kodwa empeleni, amapulani kwadingeka zabo kudingeka bushintshe. Le phrojekthi abuthole ukwesekwa lezakhamuzi ezihlaselwa futhi wabonisa yokungafaneleki yakhe yezimali kanye yokudla egcwele.
Izindleko umuzi ovuselelwe ezinkulu kangaka, ngokuvumelana uchwepheshe ulinganisela kwaba cishe oda efanayo izindleko kubhidlizwe izindlu ezindala kanye nokwakhiwa ikhaya elisha. Demolition "nesnosimyh" esinezitezi ezinhlanu namanje sivunyiwe eMoscow. Ngaphezu "Khrushchev" ohlwini angaphansi ke ngaphambi kokuphela 2018 Ufake izindlu izakhiwo zokuhlala, Uzophinda uthole isimo esiphuthumayo ukuphakama 1-4 izibuya.
On isakhiwo wave
Ngokuya kubhidlizwe esinezitezi ezinhlanu ihlinzeka ukuthi omningi walo msebenzi ku kwaqedwa enkathini yokugcina eMoscow (iminyaka 2017-2018) kuyodingeka samanje 2017. Esikhathini esilandelayo ukuqedela yimuphi umsebenzi ezengeziwe phezu ukuqaliswa kohlelo.
ukwelashwa ngokushesha endlini ukudilizwa kumane nje kuyingxenye yomthwalo uhlelo olushiwo ngenhla. Inkinga eyinhloko kungaphezu ebizayo sína nokuqukethwe kwalo, uku Ukuthuthela izakhamuzi zangaphambili zezakhiwo ezindala futhi agugile isitokwe ngokuya zokuhlala ezintsha okunethezeka. Kule ndaba kufanele kushiwo umqondo okuthiwa ukuthuthukiswa wave - ndlela sihlelwe ukuqaliswa ebizayo isikhathi inqubo kuthuthwa.
Hlela i-kubhidlizwe esinezitezi ezinhlanu e Moscow - izigaba inqubo
Lolu khetho yaziwa njengenye isixazululo esingcono kakhulu ukuhambisa inkinga. Siqukethe lwezinyathelo, okuyinto zimi kanje:
Ekuqaleni, indlu entsha yakhiwe.
Khona-ke abaqashile kuhlelwe ukuthi lowo muntu adilize elinezitezi ezinhlanu wokwakha kuthiwa matasa kuwo.
Esigabeni esilandelayo - alamu ezingenalutho (ramshackle) izindlu wenziwa acekela.
On insimu abakhululiwe ngenxa isakhiwo esisha.
Nge ukwakhiwa kwezindawo zokuhlala kumele unikezwe zonke izingqalasizinda edingekayo. Kuyinto, ngaphezu kwakho konke, izikhungo yezingane (ezikoleni, e izinkulisa), khona-ke - kungqalasizinda ezibucayi bezokwelapha nabanye. Esakhiwe emhlabeni amakhaya kufanele abe yizindawo car yokupaka, kanye unikezwe konke ukuxhumana kudingeka.
Prakthiza kubonisa ukuthi indlela yokwakhiwa uye wafakazela wave ngendlela engcono. isicelo salo zabo ukuze bakhonze izithakazelo kokubili izinkampani zokwakha kanye abantu abangekho ku Izindawo. Ngesikhathi esifanayo, ngeke amacala ukunganeliseki izakhamizi kwekuhlela kabusha maqondana ngenxa yezizathu eziningana.
Ukuze Kulokhu enikeziwe ingxoxo yomphakathi lezakhamuzi lokuzwakalisa imizwa izimangalo zanqwabelana futhi ukuxazulula ukuphokophela. agumenti Ngezenzo wazwakalisa ukukhononda, kusekelwa agumenti ezinengqondo, kwezinye izimo, kwaholela ezinguqukweni sina ngempela futhi ukuklanywa.
Adilize noma kulungiswe?
Kodwa nokho kwaba ngesisekelo isinqumo emagunyeni 'ukuqala uhlelo? kubhidlizwe esinezitezi ezinhlanu e uhlelo eMoscow yasungulwa okusekelwe idatha eyanikezwa osomnotho, eziphathelene ngesidingo enjalo kulungiswe izindlu. Ngokusho ochwepheshe, le nqubo ubonakala ezingenanzuzo. izindleko elilinganiswayo ngokuba ukukhanda amadala isakhiwo akusebenzi futhi elinezitezi ezinhlanu ngeke kube yi kulindeleke.
kakhulu kusakhiwo lale mpahla, ngokuhlanganiswa impahla kanye nomklamo izici abakwazi ukukhuluma mayelana nokwenzeka ukusungula ngaphakathi kwezindonga zabo ezingeni ngokuyinhloko entsha wenduduzo kulabo abahlala kuzo. Ochwepheshe baye waveza ukuthi esinye sezizathu ekuziphatheni okungalungile kulungiswe ezifana isakhiwo sabo, lapho ukuxhumana olwenziwa ngaphakathi kwezindonga futhi cishe ayikwazi ukushintshwa. Lokho, kokunquma ukulungiswa ezinkulu, ukuthi iziphathimandla ngandlela-thile kufanele nginakekele umbuzo Izindawo, okungenani okwesikhashana.
Ngokushesha ziyohlala zonke
Iningi lezinto kwezindlu cishe ingalungeli wonke uhlobo izenzakalo ukulungisa lokubuyiselwa kabusha. iminyaka eyakhelwe engu-60 edlule, base ibalwa ubude ukuhlala engekho ngaphezu kuka-25 noma engu-30 edlule.
Njengoba kumagazini yezindlu Namanje uhlalwe azibe ngu 1.6 million. IMeya inhlokodolobha Sergei Sobyanin kwamenyezelwa isinqumo ukuqedela isigaba lokugcina hlelo eminyakeni emibili ezayo. Iningi izindlu eseyiqedile ngempumelelo, izakhamuzi wathola indawo yokuhlala entsha ukhululekile.
Inkinga eyinhloko sasisalindelwe Onjiniyela zohlelo, isibe ohlangothini isabelomali sezinto. Ingabe izikhulu zedolobha ngadonsa unikezwa umthwalo eside ngokwezimali? Ingabe kungenzeka ukuheha abatshalizimali sina lolu daba?
Ngo kusaqalwa uhlelo waqalwa ikakhulukazi ngokusebenzisa indlela ukuqoqa izimali. Manje share sengonyama zokuqoqa kubhidlizwe esinezitezi ezinhlanu eMoscow yawela emahlombe isimo. Ngokuhamba izindlu 1000 inani lenombolo (kunezinhlobo ezingaphezu kuka 1700) ukuba axazulule ngenxa yengcebo. I imeya yedolobha libike ukuthi imindeni ecishe ibe yizinkulungwane 160 eMoscow bathole ithuba ukushintsha yokuhlala akusebenzi kwi ukhululekile ezindlini ezintsha.
Amathiphu ambalwa ukwenza Smokey Eyes
Indlela ukwandisa izinga lokushisa komzimba.